Quiz – DR NU MYAT THEINGI OO
အကြားအာရုံအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ အသံတွေကို နေ့တိုင်းကြားနေရတယ်။ တချို့အသံတွေက သာယာနာပျော်ဖွယ် ရှိကောင်းရှိမယ်။ တချို့ကြတော့ ဌက်ဆိုးထိုးသံလို ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဒီအသ့တွေအားလုံးကို အကြားအာရုံကောင်းနေလို့သာ ကြားနေနိုင်တာပါ။ အကြားအာရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သင်ဘယ်လောက်သိရှိနားလည်သလဲဆိုတာကို အကဲခတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။ ၁။ သီချင်းသံကြားတဲ့အခါ ကြက်သီးထတာ ခန္ဓာကိုယ်က သင်ဘယ်လိုခံစားရတယ်ထင်လို့ပါလဲ။ (က) သာယာလို့ (ခ) အထင်ကြီးလို့ (ဂ) ကြောက်လို့ အဖြေ။ (ဂ) ကြောက်လို့ အော်ပရာအဆိုတော်တွေဟာ အမြင့်သံကို အကြိမ်ကြိမ်ရောက်အောင် လေ့ကျင့်ထားကြရပြီး ငယ်သံပါအောင်အော်တဲ့ အမြင့်သံနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ဒီသီချင်းသံတွေကြားလို့ သင့်စိတ်ထဲ မကြောက်နေရင်တောင်မှ ခန္ဓာကိုယ်က သင်ကြောက်သင့်တယ်လို့ ယူဆလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြက်သီး အလိုလိုထလာတာပါ။ သီချင်းသ့ကသာ ကြက်သီးထစေတာမဟုတ်ပါ။ ရိုလာကိုစတာစီးခြင်း၊ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးခြင်း၊ တစ်ခုခုကို ကုတ်ခြစ်လို့ ထွက်လာတဲ့ အသံ စတာတွေဟာလည်း … More အကြားအာရုံအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ
Leaveacomment အကြားအာရုံအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ
စိတ်ခံစားမှုအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိသလဲ ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး ၁။ တေးဂီတက စိတ်ခံစားမှုကို အမြဲကောင်းမွန်စေနိုင်တယ် (က)မှန် (ခ) မှား အဖြေ (ခ) မှား တေးဂီတက စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ သင်နားထောင်တဲ့ ဂီတ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသေးတယ်။ လေ့လာချက်အရ ဂီတပညာရှင်မိုးဇက်ရဲ့ ဂန္ထ၀င်တေးသွားနားထောင်သူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတေါပိုမိုကောင်းမွန်နေတာမျိုးတွေ့ရပေမဲ့ တချို့တူရိယာဂီတနားထောင်နေစဉ်မှာ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ ခြောက်ခြားဖွယ်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးသွားတွေ နားဆင်ရတဲ့ အခါမျိုးမှာ ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ၂။ ဒီထဲက ဘယ်အစားအစာက စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေနိုင်သလဲ (က)သံလွင်ဆီ (ခ)ဆယ်လ်မွန်ငါး (ဂ)Walnuts (ယ)အပေါ်ကအစာအားလုံး အဖြေ (ယ) အပေါ်ကအစာအားလုံး သံလွင်ဆီများစွာစားသုံးသူတွေမှာ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနည်းတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်ငါးနဲ့ Walnut တွေကတော့ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေ များစွာ ကြွယ်ဝနေပါတယ်။ တချို့လေ့လာချက်တွေအရ … More How much do you know about Mood?
Leaveacomment How much do you know about Mood?
သင့်နှလုံးခုန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာရယ်၊ နှလုံးခုန်နှုန်းရယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိသလဲ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ၁။ ပုံမှန်ဆိုရင် တစ်မိနစ်ကို ဘယ်နှကြိမ်နှုန်း နှလုံးခုန်လေ့ရှိပါသလဲ (က) ၂၀ကနေ ၆၀ (ခ) ၆၀ကနေ ၁၀၀ (ဂ) ၁၀၀ ကနေ ၁၄၀ အဖြေ။ (ခ) အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာဖြတ်လတ်မှု၊ လှုပ်ရှားနေလား၊ နားနေလား စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး နှလုံးခုန်နှုန်း အမျိုးမျိုး ကွာခြားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန် သွေးခုန်နှုန်းကတော့ တစ်မိနစ်ကို အကြိမ် ၆၀ကနေ ၁၀၀ကြားရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုင်းချင်ရင် ဘယ်လက်ကောက်ဝတ် လက်မအောက်နားက အကြောကို ညာဘက်လက်ချောင်း၃ချောင်းနဲ့ ဖိပြီး နာရီကြည့်ကာ တစ်မိနစ်မှာ ဘယ်နှကြိ်မ်ခုန်လည်း စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ … More သင့်နှလုံးခုန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ
Leaveacomment သင့်နှလုံးခုန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ
HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT EXERCISE? ===================================== ‪#‎လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းဘယ်လောက်သိသလဲ‬ ♣ ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး အဆင့်မြင့်အားကစားခန်းမတွေ Gym တွေ၊ Fitness Center တွေပေါ်လာပြီးနောက် Exercise တွေ Wor­kout တွေလုပ်နေပေမယ့် ကိုယ်လုပ်တာတွေ တကယ် ကော ထိရောက်ရဲ့လား ဗဟုသုတကောလုံလုံလောက် လောက်ရှိရဲ့လား ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့။ ▄▄ 1 ▄▄ အနာမခံ အသာမစံဆိုတာ အမြဲမှန်လား ♣ မှန် ♣ မှား အဖြေ – မှား နာကျင်မှုခံစားရပါက လုပ်နေတာတွေရပ်လိုက်ပါ။ နောက် တစ်ခါထပ်မလုပ်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသတိုင်ပင်ပါ။ ကြွက်သားနာကျင်ရုံ သက်သက်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ခုမှ လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်သူတွေ၊ မလုပ်ဘဲအကြာကြီးနေပြီးမှ ပြန်လုပ်သူတွေဆို ကြွက်သားတွေ တစ်ပတ် … More HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT EXERCISE?
Leaveacomment HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT EXERCISE?